ဘာတွေက မင်းကို အမြင့်ရောက်စေလဲ – Live the Dream
ကိုယ့်ကိုယ်ကိုတိုးတက်ဖို့အတွက် ဘယ်က သင်ယူရလဲ?? တတ်ကျမ်းတွေကလား…အတွေ့အကြုံကလား. တတ်ကျမ်းတွေက ထိရောက်မှုတော့ရှိပါတယ် လက်တွေ့ဘဝထဲအသုံးချနိုင်ရင်ပေါ့… ဒါပေမဲ့ကိုယ်တိုင်အတွေ့အကြုံကျတော့ ဘာစာအုပ်မှဖတ်စရာမလိုဘူး ပိုပြီးတော့ ထိရောက်စွာသင်ကြားပေးနိုင်တယ်။ ဒီလိုအရာတွေကို သင်ကြားသွားရင်း ရှေ့လူတွေက ကျွန်တော်တို့ကို ဆုံးမစကားပြောလေ့ရှိပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ကျွန်တော်တို့နားမထောင်တော့ ကျွန်တော်တို့ကို တစ်ခွန်းပဲပြောတော့တယ်..ကိုယ်တိုင်ကြုံမှသိမယ်တဲ့…
ကိုယ့်နေထိုင်တဲ့ နေရာ၊ အလုပ်ခွင်၊ ပညာရေး တွေမှာ က သင်ယူစရာတွေက များများမဟုတ်လား..ဒီအထဲက မှ ကိုယ့်ကိုနာကျင်စေတဲ့အရာတွေလည်းပါတာပေါ့ တိုးတက်စေမယ့်အရာတွေလည်းပါတာပေါ့..တစ်ခုရှိတာက ကိုယ်တွေ့ ဒူးတွေ့နဖူးတွေ့ဆိုတော့ ကိုယ်တိုင်တွေ့ကြုံခံစားရတာတွေက ကိုယ့်အတွက် နာကျင်စေနိုင်သလို မသင်ယူတတ်ရင်တိုးတက်မှုလည်း မပေးနိုင်ဘူး..မိအေး နှစ်ခါနာတာပေါ့။ အခုတော့မိအေးနှစ်ခါမနာရအောင် မင်မင် ကိုယ်တိုင်ကြုံရတဲ့ သင်ယူစရာတွေကို လူငယ်တော်တော်များများနဲ့ တိုက်ဆိုင်မယ်ထင်လို့ ဝေမျှပေးလိုက်ပါတယ်. ကိုယ်တိုင်ပြန်လည်းဆန်းစစ်နိုင်ပါစေ.. သင်ယူမှုတွေနဲ့အမြင့်ကို တက်လှမ်းနိုင်ကြပါစေနော်။
လူတွေရဲ့စိတ်ထဲမှာ သံသယ ဆိုတဲ့စိတ်က ရှိနေတော့လည်း တစ်ဖက်လူကို ယုံကြည်မှုအပြည့်အဝမထားပေးနိုင်တာ သဘာဝပါ။ ကိုယ်လုပ်မှ အဆင်ပြေမယ်လို့ထင်တတ်ကြတယ်။ အဲ့လိုလူတွေကို ကိုယ့်နဲ့ ထိတွေ့ဆက်ဆံရတဲ့ အထက်လူကြီး၊ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်၊ သူငယ်ချင်းတွေ ထဲမှာ ကြုံဖူးမယ်ထင်ပါတယ်။ ဒီအတွက်ကြောင့်နဲ့ ဝမ်းနည်းနေရင်တော့ ကိုယ်က လူညံ့တစ်ယောက်ပါ။ သင်ယူတတ်မယ်ဆိုရင် ဒါက ကိုယ့်ရဲ့ Talent တွေကို ပိုမိုတိုးတက်အောင်လုပ်ဖို့၊ လူတွေမြင်သာနိုင်အောင်လုပ်ဖို့ တွန်းအားပိုဖြစ်တာပေါ့… ဘယ်သူမှ မလေးစားလည်း ကိုယ့်ကိုယ်ကို လေးစားရမယ်၊ ကိုယ့်ကိုကိုယုံကြည်ရမယ်။ ငါလုပ်ပြမယ်ဆိုတဲ့ မာနစိတ်နဲ့ မယုံကြည်ခံရတာကို တွန်းအားအဖြစ်အသုံးပြုရင်း ရှေ့ဆက်လိုက်ပါဦးနော်။
ငါ့ကိုကျ မပေးဘူး၊ မကျွေးဘူး၊ လစာတိုးမပေးဘူး၊ ရာထူးမပေးဘူး၊ နေရာမပေးဘူး စသဖြင့် အခွင့်အရေးမရမှုတွေကို လူတွေ က သွေးပျက်တတ်ကြတယ်။ အပြစ်မြင်တတ်ကြတယ်။ စိတ်ပျက်သွားတတ်ကြတယ်။ ထိုက်သင့်တဲ့အခွင့်အရေးဆိုတာ တစ်ချိန်ချိန်တော့ ရကို ရပါတယ်။ ဒီအတွက် ကိုယ့်အနေနဲ့ လူတွေကို အပြစ်တင်စရာမလိုဘူး။ သင်ယူတတ်မယ်ဆိုရင် ဒီအခွင့်အရေး အပြင်နောက်ထပ်ကြီးမားတဲ့ အခွင့်အရေးတွေကို လည်း ပိုင်ဆိုင်နိုင်အောင်လည်း ဆက်ကြိုးစားဖို့ အားဖြစ်စေပါတယ်။။ ဒါ့ကြောင့် အခွင့်အရေးမရမှုတွေကလည်း တွန်းအားတစ်ခု ထဲက အပါအဝင်ပါပဲ။ လုပ်သင့်တဲ့အရာနဲ့ လုပ်စရာ ရှိတဲ့အရာကို ပဲလုပ်ပါ။ အခွင့်အရေးက ကိုယ့်ဆီ လာမှာ ကျိန်းသေပါတယ်။
ပိုက်ဆံမရှိတဲ့ အချိန် ကိုယ့်ဘဝရဲ့ သင်ယူစရာအကောင်းဆုံးအချိန်ပါပဲ။ ကိုယ့်မှာဘာမှ မရှိတော့ တစ်ချို့သောလူတွေက ရှောင်ဖယ်တတ်ကြတယ်။ ငြိုငြင်လာကြတယ်။ ပိုက်ဆံမရှိလို့ စားကောင်းသောက်ကောင်းတွေ မစားရတဲ့အချိန်၊ ဝယ်ချင်တာတွေ မဝယ်ရတဲ့အချိန် ကုန်ကုန်ပြောရရင် စားစရာမရှိလို့ တံတွေးမျိုချရသည့်တိုင် စိတ်အားမငယ်ပါနဲ့။ ဒါက ကိုယ့်ကို ပိုမိုကြိုးစားဖို့အကောင်းဆုံးတွန်အားတစ်ခုပါ၊ မိတ်ဆွေ စစ်၊ မိတ်ဆွေ အမှန်တွေကို သိနိုင်ဖို့အခွင့်အရေးပါ။ စားချင်စိတ်၊ သွားချင်စိတ်၊ ဝယ်ချင်စိတ်တွေကို မျိုသိပ်ပြီး ပိုမိုကြိုးစားဖို့ တွန်းအားအဖြစ်အသုံးပြုလိုက်ပါနော်။
ဇော်ဝင်ထွဋ်သီချင်းထဲမှာ လူတွေက ခရီးမဆုံးခင်အထိ ယုံကြည်စွာမှားယွင်းခွင့်ရှိတယ်တဲ့..ကြိုက်မိတယ် အဲ့ဒီစာသားလေးကို…ဘာကြောင့်လည်း ဆိုတော့ ကျွန်တော်တို့တွေ တစ်နေ့ကို တစ်ခုမက အမှားတွေ ပြုလုပ်ကြတယ်။ တစ်ချို့ က မတော်တဆမှားကြတယ်။ တစ်ချို့ကတမင်သက်သက်မှားကြတယ်။ စကားပြောမှားမယ်၊ လုပ်ရပ်တွေ၊ အပြုအမူတွေမှားမယ်၊ အတွေးအခေါ်တွေ၊ ပြဿနာဖြေရှင်းတဲ့နည်းလမ်းတွေမှားမယ်၊ သင်ယူမှုတွေ၊ သင်ကြားမှုတွေ မှားမယ် စသည်ဖြင့် မှားနည်းပေါင်းစုံနဲ့လူသားတွေဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ကိုယ့်ရဲ့အမှားတွေကနေ ဆုံးရှုံးမှုတွေ ရနိုင်သလို အရှုံးတွေထဲက ဘဝသင်ခန်းစာယူနိုင်ရင်လည်း အမြတ်ရှိတယ်။ ကိုယ်တွေ့မှားတာက ထိရောက်တဲ့သင်ယူမှုတစ်ခုဖြစ်သလို တိုးတက်ဖို့တွန်းအားတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့တစ်ခုရှိတာက အမှားတိုင်းနောက်ပြန်လှည့်လို့မရတဲ့အတွက် တမင်မှားတဲ့ အဖြစ်မျိုးတွေ နည်းဖို့လိုပါတယ်။
တစ်ခါတစ်လေ ကိုယ့်ရဲ့လုပ်ရပ်မှန်ကန်နေပေမဲ့ မတိုးတက်နိုင်သေးတဲ့အခြေအနေတွေ အများကြီးရှိပါတယ်။ ဇွဲလုံ့လနဲ့ကြိုးစားပါလျက်နဲ့ တစ်ခြားသော လူတွေလို ဘာကြောင့်မဖြစ်ထွန်းတာလဲ…မအောင်မြင်သေးတာလဲ မေးခွန်းပြန်ထုတ်ရတာ တကယ့်ကို ဝမ်းနည်း နာကျင်စရာပါ။ ဒါပေမဲ့ ဒီလုပ်ရပ်တွေကို မရပ်ပစ်လိုက်ပါနဲ့ ။ စိတ်နာနာနဲ့ ချစ်နေပေးပါ။ ဆက်လက်ရှင်သန်ခွင့်ပေးလိုက်ပါ။ အမြစ်တွေ ခိုင်တွယ်နေအောင် ကုတ်ပြီးမှ တစ်ရှိန်ထိုးရှင်သန်ကြီးထွားလာတဲ့ ဝါးပင် ဥပမာကို ကြားဖူးမယ်ထင်ပါတယ်။ တစ်ချိန်ချိန် သူများနဲ့မတူတဲ့ အမြင့်အထိ ရောက်ရှိသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ ကိုယ့်လုပ်ရပ်က မှန်နေတဲ့လုပ်ရပ်ဆိုရင် ကိုယ့်ရဲ့ အကျိုးရလာဒ်အတွက် ပိုမိုရှင်သန်စေပြီး အချိန်တစ်ခုအထိစိတ်ရှည်ဖို့လိုတယ်နော်။
လူတွေရဲ့ အောင်မြင်မှုကို မုဒိတာ မပွားနိုင်တဲ့စိတ်ဓါတ်တွေကလည်း ကိုယ့်ကို တိုးတက်မှုအတွက် နှောင့်ယှက်နေတဲ့အရာတစ်ခုပါ။ ကျွန်တော် ငယ်ငယ်တုန်းက ဆို အမေက သူများနဲ့အရမ်းကို နှိုင်းယှဉ်တတ်တယ်။ နင်သူ့ဖိနပ်ကိုင်ရမယ် ဒီစကားလုံးတွေက ကျွန်တော် အဆင့် ၁ မရမှာစိုးတဲ့စိတ်နဲ့ ပြောခဲ့ပေမဲ့ ကျွန်တော့်ထက်သူများအမှတ်များရင် မပျော်ရဘူး၊ ဖိနပ်ကိုင်ရတော့မယ်ဆိုတဲ့ Mindset က အထဲမှာရှင်သန်နေခဲ့တယ်။ တစ်ချိန်လုံးယှဉ်ပြိုင်ရင်းနဲ့ ကိုယ့်ရဲ့ အစွမ်းအစလည်း တိုးမလာခဲ့ပါဘူး။ တိုးတက်မှုလည်းမရှိပါဘူး။ နောက်ပိုင်းသိလာရတာက သူက သူ ကိုယ်က ကိုယ်ပါ။ ကိုယ်လုပ်စရာရှိတဲ့အလုပ်ကိုပဲ အာရုံစိုက်လုပ်မှ ကိုယ်က ထိပ်ဆုံးရောက်တာပါ။ ဝန်တိုမှုတွေ က ပညာသင်ကြားမှုတွေကြား၊ အလုပ်ခွင်တွေကြားမှာ အများအပြားတွေ့ရပါတယ်။ ဒီဝန်တိုမှုက ကိုယ့်ကို ဆုတ်ယုတ်စေတဲ့ အရာတစ်ခုအဖြစ် သင်ယူပါ။ ကိုယ့်ကိုယ်ကို တိုးတက်မှုတွေအတွက် ဝန်တိုကင်းတဲ့ မုဒိတာ ပွားတတ်ခြင်း တွေက လည်း အဓိက ပါပဲ။
လူတွေမှာ လုပ်ချင်ကိုင်ချင်စိတ်က ပြင်းပြလာရင် လောင်နေတဲ့မီးလိုပဲ တားမရဘူး။ ဒါတွေကို အသုံးချတတ်ရင် ကိုယ့်ကိုကို တိုးတက်ဖို့ လက်နက်တစ်ခုပါပဲ။ လောင်နေတဲ့ဆန္ဒတွေဆိုတဲ့နေရာမှာ ကောက်ရိုးမီးတွေ လို ခဏလေးပဲဖြစ်တတ်သလို အချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှ လုံးဝမရှိတော့တာမျိုးဖြစ်သွားတတ်ပါတယ်။ ဒီတော့ ကိုယ့်ဆန္ဒတွေပြင်းပြနေရင် ချက်ချင်းလုပ်ဖို့လိုအပ်သလို ရှင်သန်စေနိုင်ဖို့လည်း အရေးကြီးပါတယ်။ လောင်နေတဲ့ ဆန္ဒတွေနဲ့အတူ မရပ်မနားသင်ကြားမှုတွေ လုပ်ရင်း ရှင်သန်စေမယ်ဆိုရင် ဒီအရာက ကိုယ့်အတွက် တိုးတက်စေမယ့်အရာတစ်ခုပါပဲ။ ကောက်ရိုးမီးလို ခဏပဲတောက်လောင်နေတာ ဘယ်လောက်များနေပြီလဲ..ဆိုတာကို ပြန်လည်ရေတွက်ပြီး ကိုယ့်ဘဝအတွက် ဖြစ်နိုင်ခြေရှိတဲ့ ဆန္ဒတွေကို ရှင်သန်စေပါ။ ဒါက ကိုယ့်ကို အမြင့်ရောက်ဖို့တွန်းအားပေးနေတဲ့အရာဆိုလည်းမမှားပါဘူး။